Izimpawu ulele planus zingahlukaniswa zibe jikelele kanye ethize, futhi izimpawu ezithile ohlotsheni sokuphikisana.
Lichen planus libukeka iqoqo papules ezincane, okungase alternate nge zingcwecwe (densified kumiswa). Ngokuvamile, isikhumba ulele planus libukeka iphepha ecwebezelayo onsomi-bluish umbala.
Izimpawu ulele planus kuphawuleka kakhulu, futhi kunzima ukudida nezinye izifo dermatological. Ngokwesibonelo, uphawu noma Mesh Wickham - nombala oluhlaza njengesibhakabhaka-onsomi izilonda futhi reticulation ebonakalayo. Ukuze enembile, kugridi Wickham oluvelayo uma isicelo amathonsi samafutha zemifino esikhumbeni ethintekile. Umphumela kungabonwa streaks olumhlophe futhi iphuzu - ukukhuphuka sokugembula kule corneum stratum ezindaweni ezithile, okuyinto esikhanyayo ngokusebenzisa epithelium.
Kabnera mkhuba ngokuthi ukuvela izakhi ezindaweni wayencisha ukuhlukumezeka enkulu: ibhande, ukhololo, njll
CPL - ngempela isifo esiyingozi, njengoba ngokuvamile has a ezingalapheki noma ukuguquguquka Yiqiniso nge ukunqotshwa kwezitho zangaphakathi kanye kwalokho yokutheleleka ngegciwane yesibili. Ukulunywa kule sifo ngezinye izikhathi okungabekezeleleki, iziguli ziqala nekama umzimba wonke, kwakhiwa ebusweni kwaluqeda okuyinto ingase ibe yimbi nakakhulu. Iziguli ulele planus nje akakwazi ukulala kusuka ukulunywa nokuphatheka kabi esikhumbeni.
CPL okungcono elise phezu flexor yomzimba engenhla futhi emikhawulweni aphansi. Kungenzeka ukubukeka papules futhi zingcwecwe endaweni besisu, izinqulu, imbilapho, nezinye izindawo. Kufanele kuqashelwe ukuthi ubuso nezinwele Cishe ungalokothi abathintekayo ulele planus, kodwa ngezinye izikhathi kungenzeka ukuthola zingcwecwe ngabanye.
izimpawu ezithile okufanele ulele planus kungenzeka ukuthola e hypertrophic warty fomu. Njengoba leli gama lisikisela, sinombono classical esithombeni basemtholampilo ulele zingatholakala amaningi warty neziqu. Asikwazi indiva iqiniso lokuthi kwasendaweni yefomu emkhakheni izinwele umbala kwenzeka Alopecia, okuyinto angakwazi knock udokotela ukuba uphethwe yini.
Pemfigoidnaya (bubble) futhi ifomu fulminant ka KPL awavamile. Ziyakwazi esiyingozi ngalolo isithombe sokucindezeleka nobuntu abavamile ulele planus, okusho ukuthi uphethwe yini ngokushesha, okungukuthi, Phakathi isikhathi eside. Izimpawu ulele planus, okuyinto avele ukuma bubble, zahlukahlukene ngempela. Isithombe emitholampilo kungenzeka ziqale ukubonakala izimbotshana ezincane egcwele uketshezi esicacile noma igazi. Amagwebu angavulwa ukwakha soma.
Ezinye izinhlobo zokungabi ekwenqabeleni kukhona ezingavamile kakhulu umkhuba emtholampilo futhi zidinga ukuxilongwa umehluko nge-psoriasis, eczema, ugcunsula kanye nezinye pathologies. Nokho, kwasendaweni ulele planus e nolwelwesi lwamafinyila kuvamile ngokwanele. Isibonelo, ulele planus temlomo kwenzeka e-50% amacala. Ukuqubuka olimini buzofiphaliswa bese eyama enamathela obukhulu obumhlophe (njengaku ugcunsula zesibili), futhi ngenxa yalokho idinga ukuhlola okungeziwe.
Izimbangela ulele planus, ngeshwa, akunjalo ncamashi siyachazwa. Ososayensi baye baqaphela a njalo ezithile ukuthi zoster avame kwenzeka ngemva ukucindezeleka okunzima, ezimweni immunodifitsitnyh sikashukela. Liphinde Awuzibanga viral CPL theory kanye nezici ezithile zofuzo. Uxhumano izizukulwane, lapho ezihlotsheni zakhe wahlushwa ulele planus, kanye izinhlayiya viral etholakale focus sokugembula. Nokho, akekho noyedwa zinkolelo-mbono ezicatshangelwayo ingakamiswa lawo.